Argentina oo Bilaa Messi Ku Garaacday El Salvador
HomeWararka MaantaArgentina oo Bilaa Messi Ku Garaacday El Salvador
Xulka qaranka Argentina ayaa guul ku gaadhay xul uu ka maqan yahay xidigooda ay ku dhaartaan ee Lionel Messi iyagoo ku karbaashay qaranka El Salvador 2-0 ciyaar saaxiibtinimo oo labada xul ku dhex martay garoonka FedEx Field ee wadanka El Salvador.
Laacibka 27 sanno jirka ah ayaan laga soo kicinin kursiga kaydka isla markaana aan caafimaadkiisa hallis la gallinin kadib markii uu woxogaa dhaawac ahi ka soo gaadhay tababarkii Khamiistii oo lugta uu ka cawarmay, halka Javier Mascherano sidoo kale uu kamid ah xidigaha kaydka ku qornaa habeenkan.
Natiijada ayaa ahayd mid cirka ku laalan, wallow, uu Neston Renderos gool iska dhaliyay ka hor intii aanu Federico Mancuello ku labaynin gool heer caalami ah oo uu kubad laag xor ah ahayd shabaqa kaga ruxin meesha kulmisa birta iyo shabaqa ee koornaha sare.
Isku soo wada duubo xulka Argentina ayaa ahaa mid ilko la’ oo aan waxtar lahayn qaybtii hore ee ciyaarta oo dhan, faa’iido la’aana ku dhamaystay.
Woxogaa isbedel ah oo ay sameeyeeen qaybtii dambe markii la isugu soo laabtay ayaa keentay inay labadaas gool kaga adkaadaan qaranka El Salvador.
[contact-form][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Fikirkaaga Ka Dhiibo’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]
Benzema Oo Ka Sheekeeyey Baaskii Cidhibta ahaa ee ay dadku La Yaabeen
25/03/2015 Abdiwahab Ahmed
Dani Alves Oo Ka Laalaabtay Barcelona
San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies Full Game Highlights Dec 1, 2017-18 NBA Season